सभापति देउवालाई अमेरिकाको बधाई, गगनले भने सहकार्य गर्न तयार – Nepal Japan
सभापति देउवालाई अमेरिकाको बधाई, गगनले भने सहकार्य गर्न तयार
नेपाल जापान २९ मंसिर १६:२२
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपाली कांग्रेस सभापतिमा पुनः निर्वाचित भएकोमा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका नताका साथ मित्र देशबाट पनि बधाई आएको छ ।
यसक्रममा अमेरिकाले बधाई दिएको छ । बधाई सन्देशमा अमेरिकाले प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनका पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत १४औं महाधिवेशनबाट दोस्रो पटक सभापतिमा निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएको हो ।
यसै गरी नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा पुनः निर्वाचित हुनुभएकामा बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ । अध्यक्ष नेपालले सभापतिमा देउवाको दोस्रो कार्यकालका लागि शुभकामनासमेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।
त्यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कांग्रेस सभापतिमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएका शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिनुभएको छ ।
ट्विटरमार्फत सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै भट्टराईले देउवाको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मजबुत हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै डा. भट्टराईले उहाँको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मजबुत होस्, प्रतिगमनकारी शक्तिले टाउको उठाउन नपाउन्, अग्रगमनकारी शक्तिबीच एकता रहोस् भन्दै कामना गर्नुभएको छ ।
त्इसै गरी कांग्रेस नेता तथा महामन्त्रीका प्रत्याशी गगन थापाले बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिँदै पार्टीलाई थिति र विधिमा चलाउने परम्पराको सुरुवात गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
देउवालाई सभापतिमा हराउने अभियानमा लाग्नुभएका थापाले देउवासँग समुन्नत नेपालको अभियान र पार्टी रूपान्तरणका मुद्दामा सहकार्य हुने समेत बताउनुभएको छ ।
थापाले भन्नुभम्एको छ- “आदरणीय शेरबहादुर देउवाज्यू, पुन: सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई ! आम कांग्रेसजनको एकताको अपेक्षालाई आत्मसात गर्दै पार्टीलाई थिति र विधिमा चलाउने परम्पराको सुरुआत गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्छु । समुन्नत नेपालको अभियान र पार्टी रुपान्तरणका मुद्दामा सहकार्य हुने नै छ ।”